Fanakorontanana noho ny voka-pifidianana: mampitandrina ny mpitandro filaminana | NewsMada
Hatramin’izao, mbola mampifandroritra ny amin’ny voka-pifidianana. Ahina mafy ny mety hisian’ny fanakorontanana. Mampitandrina ny Tafika sy ny Polisim-pirenena ary ny Zandarimarim-pirenena.
“Ny mpitandro filaminana dia mampitandrina ireo rehetra, tsy ankanavaka, mampiseho fihetsika miendrika fihantsiana ka mbola hitady hamboly korontana indray eto amin’ny tany sy ny firenena. Tsy mendrika hiaina izany intsony ny firenena malagasy.”
Izay ny fanambarana iombonan’ny mpitandro filaminana, ny Tafika sy ny Polisim-pirenena ary ny Zandarimarim-pirenena, novakin’ny komandin’ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Andrianjanaka Njatoariso, teny amin’ny Toby Ratsimandrava, Andrefan’Ambohijanhary, omaly, manoloana ny fiandrasana ny voka-pifidianana amin’izao fotoana izao izay anahiana korontana.
Tany tan-dalàna i Madagasikara. Koa aoka hanana fihetsika misy fitoniana ny rehetra. Entanin’izy ireo, noho izany, ny rehetra hiandry amim-pitoniana ny voka-pifidianana ofisialy, izay mifanaraka amin’ny lalàna manankery eto amin’ny tany sy ny firenena.
Mitarika fifanoherana ny fiandrasana voka-pifidianana
Mety misarika fifanoherana ara-kevitra ny fotoana iandrasana ny valim-pifidianana, na mety ho fifandrafiana aza amin’ny samy mpiray tanindrazana. Noho izany, entanin’izy ireo ny ankolafin-kery rehetra hitandro hatrany ny tombontsoa ambonin’ny firenena ka hametraka ho zava-dehibe ny fitoniana.
Tontosa soa aman-tsara ny fifidianana filoham-pirenena, fihodinana voalohany, natao ny 7 novambra lasa teo. Maneho fisaorana ny mpiray tanindrazana ny mpitandro filaminana. Ireo nandray anjara rehetra na ny mivantana na ankolaka tamin’ny fitandroana ny filaminana sy ny fandriampahalemana nandritra ny fotoam-pifidianana izany.
Tonga nanotrona izany famakiana ny fanambarana izany ny lehiben’ny Etamazaoro jeneralin’ny tafika malagasy sy ny tale jeneralin’ny Polisim-pirenena.
Mila mivoaka izay tena safidim-bahoaka
Izay midina sy manao hetsika an-dalambe ve no hoe manakorontana? Nefa izay no hahazoan’ny olom-pirenena maneho ny heviny, rehefa tsy misy lalan-kivoahana intsony ny safidiny na avily lalana. Fanehoan-kevitra ny fandatsaham-bato amin’ny fifidianana, ady fiady ny fampiakarana ny fitarainana amin’ny fitsarana mahefa…
Saingy, inona ny ankoatra izany raha tsy araka ny safidim-bahoaka ny vokatry ny fifidianana? Na mby amin’izay tsy azon’ny olom-pirenena itokisana intsony ny andrimpanjakana sy ny fitsarana misahana ny fifidianana… Mila mivoaka izay tena safidim-bahoaka?
Na izany aza, matoa mivoaka izay fampitandremana izay, mety misy mikononkonona fanakorontanana any ho any. Ho hita eo…